In this article, waxaana dooneynaa in aad soo bandhigto 20 biimayn oo kulan xiiso leh in ordi Android. Qaar ka mid ah waxaa la bixiyaa oo qaar ka mid ah waa lacag la'aan.
Inaad horey u badan tahay in daawaday animation Ice Age jeer kun. Hadda, waxaan heysanaa la yaab weyn oo aad u. Haddii aad tahay taageere animation Ice Age, ma seegi fursadan oo kala soo bixi ciyaarta hadda.
2. Caato Man Halka 2 Saga
Fan of filimada cabsi leh? Ma tani ma seegi markaas! Taageerayaasha kulan cabsi iyo filimada maqlay kulankaan waa hubaal. Waxay ahayd sano qaar ka mid ah marka aad maqashaan "kulan oo cabsi leh", laakiin mid ka mid ah horyaalka waa mid talaabo ka hor, waana Caato-nin. Ha ka maqnaan kulankaan.
3. Qoyska Guy The Quest for Stuff
Price: $ banayeen 1.92
Mid ka mid ah kulamada ugu caansan ee Google Play. Iibsadaa ku dhowaad 10 milyan oo nuqul dukaamada! Waxaad tahay aabbe u ahaa qoyska iyo aad leedahay howlgalka si loo badbaadiyo magaalada aad. Magaaladu waxay ku riyaaqay nabad ilaa digaag ah weeraray Rafaa. Hadda waxaad 'si loo badbaadiyo magaalada iyo dadkaaga. Ciyaarta ayaa waxaa laga heli karaa version bixisay oo keliya. Laakiin waxaan dhihi lahaa way u qalantaa!
4. Shimbiraha careysan
No! Waxaan ma aan illoobin kulan aad ugu jeceshahay. Mana aha wax aan kuu sheegi karaa oo arrintan ku saabsan ciyaarta in aad hore ma aqaan! Waa la heli karaa ee macruufka iyo android. Waxa aanu hubnaa in aad leedahay waxa ku rakibay qalab aad mar hore. Haddii aadan samayn, waxa ay haatan u hesho!
Waxaan u badan tahay in tixgelin karaa ciyaarta, iyadoo ciyaarta ugu caansan ee Adventure category qalabka android. Gameplay Great oo soo jiidasho leh, waxaa loo hubiyo in dili karaa waqtiga aad saacado dheer. Kulankaan ayaa gabi ahaanba waa mid gaar ah marka ay timaado in saakay.
6. Adventure xabaalaha Eden
Kulankaan, waxaan ku leeyahay waa dilaaga markii buuxda! Adventure xabaalaha Eden waa waxa aan dooneynaa in loo yeedho "In la weeraro xabaalaha sida Lara Croft". Waxaa la sii daayay sida ciyaarta Adventure ah. Noqon doonaa in aad Lara Croft oo aad ku socoto in ay la kulmaan in badan oo adventures kala duwan!
7. Stella ee Journey
Dilaaga Time, ciyaarta bixiyo, waxaan jeclaan! Gabar lagu magacaabo Stella. Waxay kitaabkan akhrintiisa maalin maalmaha ka mid ah iyo iyada oo si lama filaan ah uu hoos u dhaco hurda laakiin markii ay soo tooso, iyada oo aan iyada oo kujirta qolkeeda dambe. Waxay sheekada iyada waxaa reading ...
8. tareen Crisis Plus
Waa in aad qaadato gacanta dhowr tareen oo iyagaan fiirinayaa. Waxay shil labaad kasta. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in. Midkoodna anaga sameeyo! Kulankaan ayaa waxa uu graphic weyn oo noqon karayn kulan aad jeceshahay in uu ciyaaro. Waxaa Download iyo xakameeyo tareenada hadda!
Masaxay ama ka mid yahay kulan kuwa aannu sugaynay sano! Waxaa la sii daayay ka hor, u tacsiyeeyaan madal. Laakiin sababo aan la ogeyn waxa ay qaadatay waqti dheer kulankan in la sii daayay.
Kulankaan bilaabo run ahaantii si lama filaan ah! Ciyaarta ayaa waxay ku saabsan tahay wiil oo si lama filaan ah tooso in kaymaha ah. Waxaad heysanaa gacanta ugu wiilkan .... Qiimaha $4.99 laakiin diyaar u ah inay heli waayey in madaxa ?! Download kulankaan hadda.
Naqshadeynta Great, gameplay weyn! Waxa laguugu soo diray si ay u yimaadeen adduunyo kale ka fog dhulka. Waxaad ku bixin doonaa inaan dhulka hoostiisa ah, laakiin aan helin qalad. Waxaa la ma sameeyo aadanuhu, laakiin by ajnabiga! Dawladda ayaa rabta macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan makhluuqaadka. Waxay iyaga doonayaan sidii ay addoommo u isticmaalaan aqoontooda ... Kulankaan waa mid aad u qabsado. Waxaan sharad aad rabto in aad ka soo dejisan iyo ciyaaro sida ugu dhaqsaha badan.
11. midii ugu duugi
Waad ku xayiran qol iyo sida kaliya ee meeshaan waa albaabka idinka soo hor jeedda, laakiin aad u sabool ah! Waxaa xiran! Waxaad aadan aqoon sida aad halkan ka helay, laakiin meel kasta oo idinka soo hor jeedda, waa talaabo kale oo si xaqiiqada dhabta ah. $ 0.99 waa kharashka. Mana aha wax ay tahay runtii mid qaali ah! Midii ugu duugi waa ciyaar tuurnimo u android la naqshadeynta weyn.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo tacabur ugu fiicneyd abid u sameeyey Android iyo macruufka! Waxaad tahay qabtay oo gasiiraddii joogtay oo waa in aad la dagaalamaan makhluuqaadka kale oo aad dunida u gaar ah. Waxaad la soo food doonaa 75 wuxuush iyo 5 madaxda xun! Iyaga baabbi'i leh in ka badan 250 alaabta. The "Sidee" waa doorashadaada. Waxaan u malaynayaa in ay u muuqataa sidii ciyaar xiiso badan.
13. xabaasha kaalinta labaad
Iyada oo ku saleysan filim. Waxay ku saabsan tahay dhallinyarada qaarkood in soo diray "Glade" adduunka. Laakiinse iyagu ma ay xusuusan sida ay halkaas ku helay. Waxay go'aan dalkan qalaad baxsadaan laakiin sida sahlan ma aha ...
Waa la heli karo android on Google Play. Sidee baad ku saabsan isku dayaan inay ka baxsadaan, oo waxay noqon hogaamiyaha sida "Thomas" ?!
Sheekadu waxay ku saabsan tahay bisad taas oo uu leeyahay gacanta ugu markab weyn, lakiin ka dib markii duufaan oo aad u xun, markabka la burburiyaa. Tagaa Bisadan badda, laakiin ugu danbeyn helay inay jasiirad iyo in marka aad u quudhin bilaabo. Si aad u jasiiradda iyo durto nolosha qaar ka mid ah waxa ay in. Sidaas tagaan aad jasiiradda ka link download!
15. Minecraft jeebka Edition
Runtii waxaan shaki aad Weligey ma maqlin kulankaan la naqshadeynta ugu xumaa ee abid! Laakiin ma si deg deg ah u xukumi! Waa mid ka mid ah kulamada ugu qabsado sameeyay. Waxaad Hiilweyne dhexe ee meel oo aad haysato waqti ilaa habeenkii si aad naftaada u hesho guri ammaan ah oo habeenkii ah u noolaadaan. Steve u baahan yahay si ay u noolaadaan habeenkii iyo maalintii, sii macdanta, beeraha ama wax uu jecel yahay!
16. dabataagan Manor
Guriga waa in aad marnaba helaan meel u dhow! Sheekada ciyaarta waa la xiriira in ay dalxiis. Qof joogi ee hotel ah. Our martida maqlaa qaar ka mid ah wararka xanta cabsi gurigan ku saabsan. Waxa uu cabsi laakiinse isagu ma xakamayn karo inuu aqoon korodhsiga ...! Dami nalalka, heli headphones iyo xiro albaabka. Waxyaabaha helayso cabsi halkan! Ciyaarta ayaa waxaa laga heli karaa labada macruufka iyo Android. Oo baxaya $ 0.99 taas oo ah qiimo fiican qaylo qaar ka mid ah!
Waxaad tahay qareen iyo aad u socoto si France. Waxaad isku qasan oo leh waxyaabo aad u baahan tahay si ay u xaliyaan. Sidoo kale waa inaad soo booqato meelaha kale oo ay aqbalaan qaar ka mid ah xilalka kale. Kulankaan ayaa la sii daayay, waayo, Android iyo Windows. Waxaan jecel! Yaa ma doonayo in ay noqoto Qareen? Iibso iyo hadda download it.
18. Wolf naga mid ah
Khalqiga naftooda noqon kartaa aadanuhu jecel la sixir! Laakiin dhibaatada bilaabo markii hoggaamiyaha tuulo iyaga taageertaa .... Hadda waxa oo dhan in aad si aad u hesho, kuwaas oo abuuray oo wax shar ah oo ku dila. Ciyaarta waa BILAASH iyo waxaan hubnaa in adiga diyaar u tahay in ay nadiifiso aad tuulada tahay, ma tahay?
Xaggee jiraan dagaal weyn oo ka dhacay inta u dhaxaysa 2 kooxood, Siths iyo Knights ee "Jedi". The Siths Xun boqortooyada weyn oo helay inta badan Galaxy. Adiga iyo kooxda yihiin rajada kaliya si loo badbaadiyo Galaxy iyo dalalkii ka Siths. Maxay yihiin hadalladan aad sugaya ?! Waxaad tahay rajada kaliya! Haddaba taga oo u badbaadin Galaxy.
Sheekadu waxay ka bilaabataa in shaybaar ee Nidaamka Solar. Waxay u ordaan qaar ka mid ah imtixaanada farsamooyinka kala duwan. In shaybaar tan, ma laha ee aadanaha. Waxaad arki kartaa oo kaliya qalabka iyo aalado ka shaqeeya. Waxaad tahay mid ka mid ah aalado, laakiin wax aan la filayn wuxuu ku saabsan yahay in ay ka dhacaan ... Kulankaan waa runtii xiiso leh iyo mid ka mid ah kuwii dilay wakhtiga ugu fiican ee waqtiga oo dhan. Si weyn lagu talinayaa.
Games toogashada Best The World ee Android in aad ka ogaato
> Resource > Emulator > Best 20 Adventure Games u Android